what, when, why: कसरी delete नहुने फोल्डर बनाउने ?
कसरी delete नहुने फोल्डर बनाउने ?
एक चोटि probably यो भईदियो रे कि कसैले तपाईंको फोल्डर डिलिट गरिदियो । जुन फोल्डरमा तपाईंको महत्वपूर्ण फाइलहरु थियो । त्यसैले तपाईंको लागि यो जरुरी छ कि भबिस्यमा फेरी यस्तो नहोस् । फेरी पनि तपाईंको महत्वपूर्ण फाइलहरु भएको फोल्डर delete हुन बाट जोगाउनु तपाईंको लागि जरुरी छ त्यसको लागि तपाईंले यस्तो महत्वपूर्ण फोल्डरलाई undeletable किन नबनाउने ? अबस्य पनि तपाईं यस्तो फोल्डर बनाउन चाहनु हुन्छ नै होला कसो त ? यहाँ त्यसको लागि सजिलो tips छ जसले तपाईंलाई मद्घत गर्न सक्छ कि ?
१) Command Prompt खोल्लुनोस । ( Start > Run र त्यहा cmd टाईप गर्नुहोस् )
2) cmd मा directory change गर्नुहोस् जहाँ तपाईंलाई मन लाग्छ अथवा जहाँ तपाईंलाई undeletable folder बनाउनु छ । यहाँ मैले E drive छाने । त्यसको लागि cmd मा E: टाईप गर्नुहोस् र Enter हान्नुहोस् ।
३) अब md \_lpt1\_\_ टाईप गर्नुहोस् र Enter गर्नुहोस् ।
४) तपाईंको E drive मा lpt1 नामको फोल्डर बन्यो ।
५) यो फोल्डर भित्र आफ्नो फाइलहरु राख्न lpt1 फोल्डर भित्र new folder बनाउनुहोस् र newfolder भित्र आफ्नो महत्वपूर्ण फाइलहरु कपि गरेर पेस्ट गर्नुहोस् ।
६) यदि तपाईंले यो फोल्डरलाई delete अथवा rename गर्न खोज्नु भयो भने यस्तो मेसेज आउनेछ ।
७) कसरी यो फोल्डरलाई डिलिट गर्न सकिन्छ त ? तरिका सजिलो छ ।
८) cmd मा फेरी जानुहोस् र E: टाईप गरेर enter गर्नुहोस् ।
९) अब त्यहा यो टाईप गर्नुहोस् । rd \_lpt1\_\_ र enter गर्नुहोस् ।
१०) फोल्डर डिलिट भयो ।
thanks for giving such imformative knowladge< and plz keep it up, I just like to aske that what is the "e drive"? and where is it in the computer? and how can I get muy "1pt1" folders there? plz suggest me